မိုဘိုင်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ |
နေအိမ် » Phone ကိုကာစီနိုအပိုဆု » မိုဘိုင်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုပါ မိုဘိုင်းကစားတဲ့, Slots and Other Casino No Deposit Required Offer Here!
ဤ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ MobileCasinoFreeBonus.com စုဆောင်းထားတဲ့အတွက်ထုံးစံအုပ်ချုပ်, အသုံးပြုမှု, ထိန်းသိမ်းထားနှင့်သုံးစွဲသူများထံမှကောက်ယူသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့အသိပေး (အသီးအသီး, တစ်ဦး “အသုံးပြုသူကို”) ၏ ကို http://www.mobilecasinofreebonus.com ဝက်ဘ်ဆိုက် (“ဆိုက်ကို”). ဒီသီးမူဝါဒကိုဆိုက်နှင့်ကကမ်းလှမ်းအားလုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသက်ဆိုင် မိုဘိုင်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု .com.
ကျနော်တို့လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်. နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသူများထံမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းစေခြင်းငှါ, န်ဆောင်မှု, အင်္ဂါရပ်တွေသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါစေ. အသုံးပြုသူများအဘို့တောင်းလျှောက်စေခြင်းငှါ, သင့်လျော်သောအဖြစ်, နာမတျောကို, ဖုန်းနံပါတ်. အသုံးပြုသူများသည် may, သို့သော်, အမည်ဝှက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. သူတို့ဆန္ဒအလျောက်ကျွန်တော်တို့ကိုတို့အားဤသို့သောသတင်းအချက်အလက်တင်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့သာအသုံးပြုသူများထံမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းလိမ့်မည်. အသုံးပြုသူများသည်အမြဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ဖို့ငြင်းဆန်နိုင်, ဒါကြောင့်အချို့သောဆိုက်ကိုဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးစေခြင်းငှါ မှလွဲ..
သူတို့သည်ငါတို့ဆိုက်ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါတိုင်းကျနော်တို့အသုံးပြုသူများအကြောင်း Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းစေခြင်းငှါ. non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက် browser ကိုနာမတျောကိုပါဝင်စေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအသုံးပြုသူများနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအမျိုးအစား, ထိုသို့သော operating system နဲ့အင်တာနက်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးအသုံးပြုသွားမည်နှင့်အခြားအလားတူသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသုံးနိုင်ပါသည် “cookies တွေကို” အသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံမြှင့်တင်ရန်. အသုံးပြုသူရဲ့ web browser ကိုစံချိန်တင်-စောင့်ရှောက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့မိမိတို့ hard drive ပေါ်တွင် cookies တွေကိုထားနှင့်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုခြေရာခံဖို့. အသုံးပြုသူ cookies တွေကိုငြင်းဆန်ဖို့၎င်းတို့၏ web browser ကိုသတ်မှတ်ထားဖို့ရှေးခယျြစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ် cookies များကိုစေလွှတ်တော်မူလျက်ရှိသည်အခါသင်သတိပေး. သူတို့ပြုလျှင်, ဆိုက်အချို့ကိုအစိတ်အပိုင်းများစနစ်တကျလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမပြုစေခြင်းငှါသတိပြုပါ.
– အသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံ personalize မှ
– ငွေပေးချေမှုကို process မှ
ကြောင်းအမိန့်မှသာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အမိန့်အားမရသောအခါကြှနျုပျတို့အသုံးပြုသူများသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းများကိုသတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည်. ကျနော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုပေးလိုအပ်သောအတိုင်းအတာအထိ မှလွဲ. ပြင်ပမှာပါတီများနှင့်အတူဤသတင်းအချက်အလက်မျှဝေကြပါဘူး.
– တစ်ဦးမြှင့်တင်ရေးကို run ဖို့, ပြိုင်ပွဲ, စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုက်ကိုအင်္ဂါရပ်
အသုံးပြုသူများသည်သူတို့ငါတို့သည်သူတို့မှအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ခံယူဖို့သဘောတူသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ရန်.
ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်လျော်တဲ့ data တွေကိုစုဆောင်းချမှတ်, သိုလှောင်မှုနဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အလေ့အကျင့်များနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအစီအမံ, ပွောငျးလှဲခွငျး, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်း, အသုံးပြုသူအမည်, စကားဝှက်ကို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားအရောင်းအဝယ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာများ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အသုံးပြုသူများအဘို့တတ်နိုင်သလောက်အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၏အဖြစ်လုံခြုံဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် PCI အားနည်းချက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှု၌ရှိ၏.
ကျနော်တို့မရောင်းကြဘူး, ကုန်သွယ်, သို့မဟုတ်အခြားသူများအားအသုံးပြုသူများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်ငှား. ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဧည့်သည်များနှင့်သုံးစွဲသူများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်မဟုတ်ယေဘုယျစုပေါင်းလူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်မျှဝေစေခြင်းငှါ, အထက်ဖော်ပြရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချ affiliates နှင့်ကြော်ငြာရှင်များ.
အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အဆိုဒ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလင့်ထားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာကိုရှာတွေ့စေခြင်းငှါ, ပေးသွင်း, ကြော်ငြာရှင်များ, စပွန်ဆာ, လိုင်စင်ရနှင့်အခြားတတိယပါတီများ. ကျနော်တို့ဒီဆိုက်များပေါ်တွင်ပေါ်လာသောအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်လင့်များမထိန်းချုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုမှသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအားဖြင့်အလုပ်အလေ့အကျင့်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤဆိုဒ်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု, သူတို့၏အကြောင်းအရာနှင့်လင့်များအပါအဝင်, အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စေခြင်းငှါ. ဤဆိုဒ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမူဝါဒများရှိစေခြင်းငှါ. အခြားမည်သည့် website တွင် browsing နှင့်အပြန်အလှန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှ link တစ်ခုရှိသည်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင်, ကဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်မူဝါဒများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းကြော်ငြာကြော်ငြာမိတ်ဖက်အားဖြင့်အသုံးပြုသူများမှကယ်နှုတ်မည်အကြောင်း,, အဘယ်သူသည် cookies တွေကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းငှါ. ဤရွေ့ကား cookies တွေကိုကြော်ငြာ server ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာအသိအမှတ်ပြုရန်သူတို့သင်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာကိုသုံးသူအကြောင်းမဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက် compile ရန်သင့်အားအွန်လိုင်းမှကြော်ငြာပေးပို့တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ခွင့်ပြု. ဤအချက်အလက်မှကြော်ငြာကွန်ရက်များခွင့်ပြု, အခြားအမှုအရာတို့တွင်, သူတို့သည်သင့်အားအလွန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်လျာထားသောကြော်ငြာတွေမကယ်မလွှတ်. ဒီသီးမူဝါဒကိုမဆိုကြော်ငြာရှင်များအားဖြင့် cookies တွေကိုများအသုံးပြုခြင်းကိုဖုံးလွှမ်းမပါဘူး.
သားသမီးရဲ့အွန်လိုင်း privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာမှု
အလွန်ငယ်ရွယ်များ၏ privacy ကိုကာကွယ်ခြင်းအထူးသဖြင့်အရေးပါသည်. ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျနော်တို့ကတကယ်တော့သိအောက်မှာသူတို့ကိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှာသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းသို့မဟုတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဘယ်တော့မှ 18, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုအဘယ်သူမျှမတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောက်မှာမည်သူမဆိုဆွဲဆောင်ရန်ပုံဖွဲ့စည်းခဲ့သည် 18.
MobileCasinoFreeBonus.com သည့်အချိန်တွင်မဆိုဒီ privacy ကိုမူဝါဒကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်အသမ္မာသတိရှိတယ်. ကြှနျုပျတို့ပွုသောအခါ,, ကြှနျုပျတို့သညျဤစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှာ updated နေ့စွဲပြန်လည်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်. ကျနော်တို့ဆိုအပြောင်းအလဲများကိုကျနော်တို့စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ကူညီကြသည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းအသိပေးနေဖို့ရန်အဘို့အမကြာခဏဒီစာမျက်နှာစစျဆေးဖို့အသုံးပြုသူများအားပေး. သင်ကအခါအားလျော်စွာဒီ privacy ကိုမူဝါဒကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံသတိထားဖ​​ြစ်လာရန်သင်၏တာဝန်ကြောင်းဝန်ခံနှင့်သဘောတူ.
ဒီဆိုက်ကိုသုံးခွငျးဖွငျ့, သငျသညျဤမူဝါဒ၏သင့်ရဲ့လက်ခံမှုကိုဆိုလို. သင်ဤမူဝါဒသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမသုံးပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး. ဤမူဝါဒအပြောင်းအလဲများကို၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါဆိုက်သင်၏ဆက်လက်အသုံးသူတို့အားအပြောင်းအလဲများသင့်ရဲ့လက်ခံမှုယူဆပါလိမ့်မည်.
ဤစာရွက်စာတမ်းမတ်လနောက်ဆုံး update လုပ်ခဲ့ 24, 2014
March 24, 2014 by မိုဘိုင်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု: posted in Phone ကိုကာစီနိုအပိုဆု • No Comments